Nhọrọ kachasị mma nke akwụkwọ akụkọ mpụ
Nyocha akwụkwọ akụkọ mpụ
Ndị nne, nke Carmen Mola
Oge ikpe ikpeazụ ga-abịara Carmen Mola. Ọ ga-eso ụzọ nke ịga nke ọma ka ọ bụ ndị na-eso ụzọ ya ga-ahapụ ya ozugbo a chọpụtara isi atọ ya? Ma ọ bụ…, n'ụzọ megidere nke ahụ, ọ ga-abụ mkpọtụ niile sitere na mmalite ma ọ bụ na ọ bụghị nke ndị ode akwụkwọ atọ nọ n'azụ pseudonym na…
Ọgwụgwụ Summers niile, nke Beñat Miranda dere
Ireland na-enyefe oge okpomọkụ ya na Ọwara Ọwara nke nwere ike iru ebe ndị Britain, dị ka ụdị mmiri dị iche iche, nke nwere okpomọkụ dị ụtọ karịa mpaghara ọ bụla ọzọ na mpaghara ahụ. Mana emehiela, oge ọkọchị Irish nwekwara akụkụ gbara ọchịchịrị n'etiti ahịhịa ndụ na-enweghị ngwụcha nke…
Ọkụ nke Phocaea, nke Lorenzo Silva
Oge na-abịa mgbe ewepụtara ihe okike onye ode akwụkwọ. ka mma nke Lorenzo Silva na-enye ya ohere iweta akwụkwọ akụkọ akụkọ ifo, edemede, akwụkwọ akụkọ mpụ na ọrụ mmekorita ndị ọzọ echefuru echefu dị ka akwụkwọ akụkọ ya nwere aka anọ kachasị ọhụrụ na Noemi Trujillo. Ma ọ dịghị mgbe ọ na-ewute ịgbake...
Ihe niile na-ere ọkụ, site Juan Gómez-Jurado
Na-eweta anyị nso na mberede combustion na a okpomọkụ mere okpomọkụ ife tupu oge, nke a "Ihe ọ bụla na-ere ọkụ" nke Juan Gómez-Jurado na-abịa kụgbuo ụbụrụ anyị ọbụna karị na otu n'ime ya multi-akụkụ ibé. N'ihi na ihe onye edemede a na-eme bụ inyefe ihe jikọrọ ya na atụmatụ ya. Ọ dịghị ihe dị mma maka nke a ...
Atụmatụ nke Jean Hanff Korelitz
Ohi n'ime ohi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Achọghị m ikwu na Jean Hanff Korelitz ezuola Joel Dicker akụkụ nke nkọwa ya na Harry Quebert bụ onye zuru oke obi anyị. Mana ndakọrịta nke isiokwu nwere ọmarịcha isi ihe ndakọrịta n'etiti eziokwu…
Ihe gbasara Alaska Sanders nke Joel Dicker dere
Obere ihe ka ga-enwe ike imikpu onwe anyị na Joel Dicker ọhụrụ. Ma mgbe nke ahụ mere, m ga-akwụsị iji kọwaa ihe m gụrụ. Site na mmalite, a na-egosi anyị ihe gbasara Alaska Sanders dị ka usoro. Mana anyị amaworị ka Dicker si eji ha emepụta akụkọ ọhụrụ…
Ụjọ nke James Ellroy
Posts iji dozie akụkọ ndụ ma ọ bụ opekata mpe otu akụkụ nke akụkụ ụwa nke agwa n'aka, ka mma inyefe onye na-ede akwụkwọ akụkọ okwu karịa onye na-ede akụkọ ndụ ama ama. Ọ dịghịkwa onye dị mma karịa James Ellroy iji depụta snippets nke ndụ n'etiti ụfọdụ ọkụ na ọtụtụ onyinyo… Banyere…
The Baby, nke Pablo Rivero
Okwu nke netwọk mmekọrịta na abysses ha bụ akụkọ ifo site n'echiche ọhụrụ. N'ihi na ọ bụghị ihe niile nwere ike ịbụ abysses gburugburu netwọk mmekọrịta. N'ezie, ọ ga-amasị m ịhụ ka ụwa nke a dị ugbu a kpọchiri na-enweghị WhatsApp ọjọọ nke anyị ga-eji kparịta ụka na otu ma ọ bụ…
Isi Mpụ nke Katarzyna Bonda
Na Poland na evocations nke onye nketa noir na agha na-ekpo ọkụ ma ọ bụ dị ka efere oyi na mbido na ịpụta na Agha Ụwa nke Abụọ, olu dị ka nke Katarzyna Bonda (dị ka nke anyị). Dolores Redondo), na-agbawa nke ukwuu. Ike na-enweghị mgbagha nke onye na-anwa anwa ijikọ…
Peeji1 Peeji2 ... Peeji20 Ọzọ →